काठमाडौं, १४ जेठ । सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी अजय सुमार्गीको विदेशबाट आएको रकमको स्रोत खोज्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको उलंघन भएको हो वा होइन हेर्न यकीन गर्न राष्ट्र बैंकलाई आदेश दिएको छ । साथै, उनको सम्पत्ति तत्काल फुकुवा नगर्न पनि आदेश दिएको छ ।
सुमार्गीले मुक्तिश्री सिमेन्ट इण्डस्ट्रिजका नाममा ल्याएको ७५ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ८० करोड नेपाली रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले रोक्का गरेपछि सुमार्गी सर्वोच्च गएका थिए । सुमार्गीले इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा रहेको उक्त रकम नरोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा दिएको रिटमाथि सर्वोच्चले सोमबार सुनुवाई गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले सुमार्गीको विपक्षमा अन्तिम फैसला सुनाएसँगै सुमार्गीको रकम निकाल्न पाउनुपर्ने माग खारेज भएको छ ।
यो फैसलासँगै सुमार्गीको उक्त रकम कुन स्रोतबाट आएको हो ? सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन उल्लंघन गरी आएको होइन ? सम्बन्धित निकायबाट कारबाही गर्नुपर्ने हो वा होइन यकिन गर्नुपर्ने भएको छ ।
यसअघि तत्कालीन न्यायाधीश दीपकराज जोशीले १० पुस २०७५ मा सुमार्गीको रीटमाथि सुनुवाई गर्दै रकम तत्काल नरोक्न आदेश दिएका थिए । उक्त आदेशसँगै सुमार्गीले राष्ट्र बैंकले रोक्का गरेको रकम निकालेर विभिन्न बैंकमा सारेका थिए ।